Unikelo lwebhola ekhatywayo: tshintsha fiat kunye nokwabelana. Ibhaso lePhuli: i-50.000 BUSD kunye neBinance-Cazoo
Unikelo lwebhola ekhatywayo: tshintsha fiat kunye nokwabelana. Ibhaso lePhuli: i-50.000 BUSD eneBinance
Ikhaya » Ikhaya » Unikelo lwebhola ekhatywayo: tshintsha fiat kunye nokwabelana. Ibhaso lePhuli: i-50.000 BUSD eneBinance
tag: Binance, Iqela lebhola ekhatywayo, Iphuli yamabhaso
I-TL: I-DR Binance isungula ukhuphiswano olutsha, ubuNtshatsheli beBhola ekhatywayo. Nabani na othengisa kakhulu aphumelele i-BUSD.
Ukubhiyozela imidlalo yamanqam yeCopa America kunye ne-EURO Cup, kunye nomoya wokukhuphisana webhola ekhatywayo, uBinance usungula ukhuphiswano lokuthengisa i-fiat ngebhaso le-50.000 BUSD.
Ngaba unomdla wokuthatha inxaxheba? Ewe, lumka kakhulu. Nantoni na oyifundayo apha ayinanto yakwenza neengcebiso zezemali, ziingxelo eziyinyani. UBinance uyayenza le nto. Khumbula ukuba ukuthengisa kuyingozi kakhulu.
Ukususela ngo-2021-07-06 09:00 AM (UTC) ukuya ngo-2021-07-12 11:59 PM (UTC)
Zonke i-VIP 0 (uninzi lwethu sonke) kunye nabasebenzisi be-VIP 1 abagqibe ngempumelelo yonke le misebenzi ilandelayo baya kwabelana ngokulinganayo ngebhaso le-10.000 BUSD:
Urhwebo ubuncinci be- $ 200 in I-BRL, i-EUR okanye iRUB
Bonisa ukuthatha kwakho inxaxheba ngokungenisa i-Binance UID yakho kule modyuli
Abathathi-nxaxheba abaphezulu abali-10.000 1 abakumgangatho wokungenisa ii-Binance UID zabo baya kufumana i-10.000 BUSD nganye. Ukuba bambalwa kunabathathi-nxaxheba abafanelekileyo abangama-10.000 XNUMX, i-pool ye-BUSD eyi-XNUMX iya kwahlulwa ngokulinganayo.
Urhwebo ngakumbi, fumana ngaphezulu
I-40.000 ye-BUSD pool pool iya kuba kuphela kubarhwebi be-100 bokuqala ngevolumu yokuthengisa iyonke (kubandakanya ukuthengisa) kwi-EUR, RUB kunye ne-BRL ngababini ngexesha lokukhuphisana.
Ukuhanjiswa kwebhaso kuya kuba ngokwetheyibhile engezantsi:
Uhlobo lomsebenzisi Cinezela kwi-BUSD
Ukususela nge-1 ukuya kwi-10 $ 18.000 * yahlulwe ngevolumu
Ukususela ngomhla we-11 ukuya kowama-50 $ 400 nganye
Ukususela nge-51 ukuya kwi-100 $ 120 nganye
Itafile yebhaso lesenzo Ubuntshatsheli beBhola ekhatywayo
* Imivuzo yabaphumeleleyo abali-10 abaphezulu iya kwahlulwa ngokusekwe kumthamo womsebenzisi opheleleyo wentengiso ngokulingana nesixa esipheleleyo sokuthengisa sabasebenzisi abaphambili abali-10 ngexesha lokhuphiswano.
Awunayo i-EUR, IRUB kunye ne-BRL?
Thenga i-BRL KWIMALI
Thenga IRUBU KWIMALI
Ukuba ufuna ukufunda le pappardella, yiya ku iphepha elizinikeleyo lokhuphiswano.
Inqaku langaphambiliYeyiphi eyona app ifanelekileyo yokuthenga ii-cryptocurrensets?
Inqaku elilandelayoEzona ngqekembe ezili-10 zabucala kunye nendlela yokuzithenga
I-India iyakwazi ukuhambisa i-Bitcoin njengeklasi ye-asethi